‘हात्तीपाइलेविरुद्धको औषधि खान डराउनुपर्दैन’ – Sajha Bisaunee
‘हात्तीपाइलेविरुद्धको औषधि खान डराउनुपर्दैन’
अघिल्ला वर्षमा जस्तै सुर्खेतमा यसपाली पनि हात्तीपाइलेविरुद्धको औषधि खुवाइने भएको छ । यसपाली जिल्लाका करिब तीन लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाइै यो औषधि खुवाउने लक्ष्य जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले लिएको छ । तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने अभियान यही चैत्र ५ गतेदेखि सुरु हुनेछ । यसका लागि महिला स्वयम्सेविका, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामार्फत् औषधि खुवाइनेछ । हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि खुवाउने अभियानको तयारी, यो औषधिको बारेमा फैलिएको भ्रमसँग सम्बन्धित रहेर हाम्रा सहकर्मी गीता थापाले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतका किटजन्य रोग नियन्त्रण सुपरभाइजर उदयबहादुर बिसीसँग कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको सम्पादित अंशः
हात्तीपाइले रोग भनेको के हो ?
हात्तीपाइले संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने सरुवा रोग हो । हात्तीपाइले रोग जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिलाई पनि हुनसक्छ । हात्तीपाइले रोगलाई अंग्रेजीमा फाइलेरिया भनिन्छ । फाइलेरिया नामक परजीविबाट सर्ने भएकोले यसलाई फाइलेरिया भनिएको हो ।
यो रोग कसरी संक्रमण हुन्छ ?
संक्रमित व्यक्तिलाई टोकेको लामखुट्टेले निरोगी व्यक्तिलाई टोक्यो भने यो रोग सर्छ । यो रोग क्युलेक्स वा एनोफिलिसको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने गर्दछ ।
हात्तीपाइलेबाट बच्न के गर्नुपर्छ ?
यो रोगबाट बच्नको लागि घरवरिपरि लामखुट्टे आउन दिनु हुँदैन । यसका लागि वातावरण सफा राख्नुपर्दछ । घर जनिकै पानी जम्ने खाल्डोलाई
पुर्नुपर्दछ । घरको झ्याल ढोकामा जाली लगाउनुपर्दछ । सुत्नेबेलामा झुलको प्रयोग गर्ने र हात्तीपाइलेको औषधि नियमित रूपमा सेवन गरेमा यो रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
सुर्खेतमा यो रोगको अवस्था कस्तो छ ?
सुर्खेतमा यो रोगको संक्रमण अवस्था पछिल्लो समय कम हुँदै गइरहेको छ । सुर्खेतमा २०६८ सालदेखि नियमित रूपमा औषधि खुवाउँदै आइरहेका छौं । गत वर्ष औषधि खुवाइ सकेपछिको रिपोर्टमा एक सय १५ जनामा हात्तीपाइलेको संक्रमण देखिएको थियो । विस्तारै त्यो संख्या घट्दो क्रममा छ । हामीले सुर्खेतलाई हात्तीपाइले रोगको संक्रमणलाई शून्य प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यका साथ औषधि खुवाउने अभियानलाई पनि तीव्रता दिइरहेका छौं ।
हात्तीपाइलेविरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान पनि सुरु हुँदैछ, तयारी कस्तो छ नि ?
हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हामीले जिल्लामा दुई हजार एक सय स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूलाई तालिम दिएर औषधि खुवाउन पठाउँछौं । यो वर्ष तीन लाख ६४ हजार मानिसलाई औषधि खुवाउने लक्ष्य लिएका छौं । यसमा पनि दुई वर्षमुनीका बालकालिका र गर्भवती महिलालाई बाहेक अरु सबैले औषधि सेवन गर्नुपर्छ । यो अभियानलाई सफल बनाउनको लागि हामीले जिल्लाका सबै सञ्चार माध्यमहरूमा पनि सूचना प्रकाशित तथा प्रसारण गरिसकेका छौं । माइकिङ पनि गरिरहेका छौं । तयारी सबै पूरा नै भइसकेको छ ।
तर, यो रोगको औषधि सेवन गर्न मानिसहरू डराउँछन् नि ? डराउनुपर्ने केही कारण छ ?
ट्याब्लेट भएकाले सुरुमा खान डराएका हुन् । तर, यो औषधि सेवनले कुनै पनि किसिमको साइडिफेक्ट भने गर्दैन । औषधि सेवन गरेका व्यक्तिको शरीरमा अरू नै रोगको संक्रमण छ भने ज्वरो आएको जस्तो हुने, रिंगटा लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने जस्ता केही लक्षण देखिन सक्छन् । हात्तीपाइलेको औषधि सेवनले मानिसको शरीरमा रहेका जुका, चुर्ना, अंकुसे जुका मर्ने तथा बाहिर निस्किने गर्छन् । यो औषधि दुई वर्षमुनीका बच्चा, गर्भवती महिला तथा सिकिस्त बिरामीबाहेक अरू सबैले खानु राम्रो हुन्छ । यो रोग लागेपछि गोडा सुन्निने, अण्डकोष सुन्निने, महिलामा योनी तथा स्तन सुन्निने जस्ता लक्षण देखिन्छन् । यो रोग परजीविबाट संक्रमण हुने भए पनि बाहिर लक्षण नदेखिएसम्म व्यक्ति स्वस्थ नै देखिनसक्छ । तर, बाहिर लक्षण नदेखिएसम्म यसको कुनै उपचार हुँदैन । हात्तीपाइले रोगको औषधि सरकारले विशेष कार्यक्रममार्फत् खुवाउने गरेको छ । त्यस अन्तर्गत सुर्खेतमा पनि चैत ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म औषधि खुवाउने अभियान नै सञ्चालन हुँदैछ ।
अघिल्लो वर्ष सुरक्षाकर्मीले नै औषधी सेवन गरेनन्, अब सर्वसाधारणले कसरी सेवन गर्लान् ?
गत वर्ष सुरक्षाकर्मीहरूले औषधि सेवन नगरेको भन्ने गलत हो । औषधि सेवनले उनीहरूको काममा बाधा हुन्छ भनेर पहिला औषधि सेवन नगरेका मात्र हुन् । तर, पछि सबैले औषधि सेवन गरेको रिपोर्ट हामीलाई बुझाउन आउनुभएको थियो । सुरक्षाकर्मीहरूले औषधि सेवन गर्छन् । सबै सुरक्षा निकायहरूमा स्वास्थ्यको टिम रहेको छ त्यसैमार्फत् हामीले सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि औषधि सेवन गराउने गर्छौं । सर्वसाधारणलाई पनि हामीले सचेत गराएका छौं । औषधि सेवन गर्दा हात्तीपाइले रोग लागेको भए पनि ठीक हुन्छ र नलागेको भए पनि संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ।
अभियानमा औषधि वितरण कसरी गर्नुहुन्छ ?
औषधि वितरण हामीले हरेक गाविस तथा नगरपालिकामा स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूमार्फत् खुवाउने गर्छौं । दुईदेखि पाँच वर्षसम्मका बच्चालाई एक चक्की, ६ देखि १४ वर्षसम्मका दुई चक्की र १५ देखि माथि सबै उमेर समूहलाई तीन चक्की औषधि खुवाउनुपर्छ । जिल्लाभरका २१ सय स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूमार्फत् क्याम्प खडा गरेर औषधि खुवाउने गर्छौं ।
रोग लाग्दा सुरुमा सामान्य अवस्थामा हात खुट्टा सुनिने, पुरुषमा हाइड्रोशील हुने र महिलामा स्तन सुनिने लगायतका लक्षण देखिन्छ । यो रोग एक पटक लागेपछि जीवनभर निको हुँदैन । मानिसको शरीरमा हात्तीपाइले रोगको परजीवि प्रवेश गर्नासाथ यो रोग देखापर्दैन । यो परजीवि करिब छ वर्षसम्म मानिसको शरीरमा सुसुप्त अवस्थामा रहन्छ । यो परजीवि शरीरमा छ भने हात्तीपाइलेको औषधि सेवन गरेपछि कसै–कसैलाई ज्वरो आउने, वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने, जस्ता सामान्य असर देखापर्नसक्छन् । फाइलेरिया परजीविले लाखौंको संख्यामा उत्पादन गर्ने सूक्ष्म फाइलेरिया रगतमा पुगिरहेका हुन्छन् यी एकदेखि दुई वर्षसम्म जीवित रहन्छन् । यो रोग लागेको मानिसको तुरुन्तै मृत्यु भने हुँदैन । तापनि यस रोगले भेटेपछि उपचार भने नहुने भएकाले मानिसलाई जीवनभर भद्धा शरीर लिएर बाँच्नुपर्ने बनाउँछ । मानिसको शरीरमा यो रोग लागेर विकसित भएपछि उपचार नहुने भएकाले यस रोगलाई सुरुको अवस्थाबाटै नियन्त्रणमा ल्याउनु नै यसको नियन्त्रण भएकाले शरीरमा देखापर्नु भन्दा पहिले नै उपचार गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । समयमै उपचार गर्नसके हात्तीपाइले रोग निको हुन्छ । सरकारले हात्तीपाइले रोगका लागि निःशुल्क औषधि पनि दिएको छ । समयमै उपचार नगर्नु तथा बेवास्ता गर्नु हात्तीपाइलेले ठूलो समस्या निम्त्याउने प्रमुख कारण हो । त्यसैले नियमित रूपमा औषधि सेवन गरेर हात्तीपाइले रोगको संक्रमणबाट बचौं भन्न चाहन्छु । साथै यो अभियानलाई सफल बनाउनको लागि सबै सुर्खेतबासीहरूलाई औषधि सेवन गरेर र अरुलाई पनि सम्झाएर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्छु ।
प्रकाशित मितिः ३ चैत्र २०७३, बिहीबार ०८:१४